Ukukhala dermatitis libhekisela eqenjini atopic diathesis. Leli fomu lesi sifo, odokotela cabanga ezinzima kakhulu izingane. Lokhu kungenxa imininingwane isithombe emitholampilo nokwelashwa kwezifo kungakephuzi.
Yini uyakhala dermatitis ezinganeni
I lolwehlukanisa lolu hlobo dermatitis Kuyaphawuleka ukuthi focus ukuvuvukala njalo olumanzi imifantu kokuvela noma izilonda zigcwele ubovu, okuyinto inkimbinkimbi inqubo sifo nokwelashwa kwayo.
Ukukhala dermatitis ezinganeni ngezinhlobo eziningi. Foci kwasendaweni ezahlukene seqembu ngalinye ubudala.
Lapho ngineminyaka engu-ukukhala dermatitis uhlukaniswe:
Izinsana nezingane kuze iminyaka 2. ezindaweni ezithintekile - ubuso, izindololwane namadolo emphethweni, ngezikhathi ezithile emzimbeni.
Izingane ezivela 3 iminyaka engu-12 - entanyeni, nemilenze emphethweni, izandla ohlangothini emuva.
Intsha kusuka 13 kuya kwengu-18 - ebusweni, entanyeni, emphethweni uhlamvu zemvelo.
Musa ukudida lolu hlobo dermatitis, eczema, esithinta kuphela ebusweni isikhumba. Ukukhala dermatitis (isithombe cm. Ngezansi) ebangela ukuvuvukala ngenxa ukuvuvukala isikhumba izingqimba ezijulile.
Ukubukeka ukukhala dermatitis ezinganeni kungadalwa izinto zangaphakathi nezangaphandle. Lezi zihlanganisa:
Imiraro ipheshana wokugaya ukudla. Lesi sifo kwenzeka ngenxa yokuntuleka cleavage izinsalela zokudla. ukukhala okunjalo dermatitis ezinsaneni kwenzeka kaningi kakhulu ngoba wokungapheleli wokugaya ukudla.
Komzimba ukuze ukudla noma amakhemikhali kanye nemithi. Ngokwesibonelo, dermatitis ukukhala atopic landile izingane ezincane, zinikwa ubisi lwebele.
Ukuba khona e umzimba kwegciwane kuphakamisa dermatitis ukubukeka ukwakha abagcwele kuvuze ubomvu.
Pathology yezinso kanye isibindi, kanye ukungasebenzi kwamanyikwe zenzeka njengoba imbangela dermatitis ezinganeni kancane kaningi.
uhlelo Izingane sokuzivikela, buthakathaka ngenxa yesifo noma teething, kungabangela ukuthuthukiswa dermatitis ekhala.
Ukubonakaliswa sifo kuhlobene nokuba amaqembu yobudala izingane:
Kwezinhliziyo zezinsana nezezingane kuze iminyaka 3, lesi sifo iqala ukubonakala ukukhala nezimagqabhagqabha, okuyinto ke zome ukuze ecolekile. Ukuze leli qembu libhekene ukoma kwesikhumba, uyaxebuka yayo kanye ukulunywa ezinzima. Uma akhiwa Bubbles, bavame liqhume.
Izingane eminyakeni 3-12 ugula isikhathi eside ukwedlula izingane, ngisho naphezu ukwelashwa. Dermatitis libhekene ukuvuvukala isikhumba, uyaxebuka futhi hyperemia. Kwangathi avele imifantu kubuhlungu endaweni le lesion. Ngemva yokutakula, ngokuvamile esikhumbeni kukhona izilongotshane futhi elimnyama, elalihlala ezinyangeni ezimbalwa ukudlula benganakwa muntu.
Intsha iminyaka 13-18. Lesi sifo singase siqale ngendlela ngokuzumayo futhi ngokuzumayo ukuqeda. In esigabeni oyingozi kuthinta izindawo ezinkulu emzimbeni.
Ephambi kwezinduna izimpawu eyodwa noma ngaphezulu kungcono uye kudokotela uyofuna icebiso i ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe, ikakhulukazi izinsana.
Ngesikhathi besanda kuqala uphethwe isifo kubaluleke kakhulu. Kufanele ngokushesha ukukhombisa wezingane yengane, ngubani uyoncoma iyiphi ukuphungula izimpawu dermatitis izinyathelo futhi uqondise reception kuze Udokotela awe-aleji.
Udokotela awe-aleji libeke ukuhlolwa ezidingekayo kutholakale imbangela dermatitis. Ngokuvamile kuba ukuhlolwa igazi ukuze kutholakale izinga eosinophils nobukhona Ige. Lezi izilinganiso ezimbili kubalulekile ukusungula umsuka dermatitis nomzimba.
Ngemva kwalokho, umntwana kufanele lihlolwe wesikhumba futhi ukuthatha izingane amanxeba scrapings izilonda mycotic.
Lapho imiphumela yakho konke ukuhlolwa empeleni iyokwaziwa, udokotela wezingane eyonquma uhlobo lwesifo futhi zibeka ukwelashwa okufanele.
Ukukhala dermatitis, ekwelapheni lapho kufanele waqala ngokushesha, kudinga lahlukene ukwelashwa zokwelapha. Lezi zihlanganisa:
Ukuqhela le allergen kusukela ingane;
inhlanzeko ngokucophelela ezindaweni ezithintekile;
Lubrication izilonda yokugcoba ukuvuvukala;
Uma udokotela wathola ukuthi isifo zazivela khona i allergen ekhaya lapho kukhona ingane, kubalulekile ukuqeda le imbangela. Lezi Amagciwane kungaba powder, ezintulini, kumakhemikhali ahlukahlukene, ezithinta isikhumba ingane.
Okudingeka ukuthi ukudla. Uma ethola ukuthi unesifo "ukukhala dermatitis" ezinsaneni, ukwelashwa kufanele siqale ngamazwi Ukudla nabancelisayo noma ubukeza isikimu yokudla.
Izingane ezindadlana akufanele bathathe ukudla obomvu kanye nokudla ophuzi noma allergen ngokuqondile aqine.
Nokuqubuka dermatitis kufanele kuzohanjiswa nge nosawoti, nokusebenzisa isixazululo ezibuthakathaka manganese. Njengoba udokotela kuyadingeka ukusebenzisa yangaphandle eqeda ukuvuvukala futhi anti-webhaktheriya yokugcoba, okhilimu noma izifutho. Lokhu kungaba "Bepanten", "Solkoseril".
Uma kukhona igciwane yesibili, okufanele lisetshenziswe futhi kuhlanganiswe imithi elwa namagciwane - "Triderm", "pimafukort".
Ekwelapheni ukukhala dermatitis kudingeka silondoloze lokushisa ukhululekile umntwana emoyeni, pholisa igumbi futhi ungavumeli omiswe ulwelwesi lwamafinyila. Lezi zinyathelo kuyosisiza ukuvimbela okuvela kuyo izifo ezithize ku isizinda buthaka dermatitis mzimba.
Uma zokwelapha eziyinkimbinkimbi ungazange ayithelanga imiphumela oyifunayo, udokotela sinquma ukusetshenziswa imithi ngomlomo.
Lezi imithi zihlanganisa izidakamizwa amaqembu ezilandelayo:
Okokuqala antihistamine ebekiwe oyosusa ukulunywa ( "Claritin", "Loratadine").
Izingane lezo zinkinga esikhumbeni inika uzwe ubuhlungu obukhulu. Baqala ukwenza futhi ukulala kahle. Ezimweni ezinjalo, yokwamukela sedatives ukukhanya (valerian, motherwort) ulungisiswa. Kubalulekile ngokuqinile umthamo.
Buyisela microflora isisu namathumbu ngemva kokudla imithi ukusiza probiotics ( "dextrin", "Lactulose").
Uma izinga lomonakalo isikhumba likhulu, udokotela imithi yokugcoba hormone - glucocorticosteroids. Lezi zihlanganisa "Hydrocortisone", "Prednisolone".
Immunomodulators ukusekela amabutho esibuthaka soMbuso ingane futhi asize umzimba ukulwa nesifo ngokwemvelo.
Kwezinye izimo, ibhamuza esikhulu bangase bafinyelele endaweni okwenziwe papules encane. Odokotela batusa ubambe wokuvula yayo, kodwa lokhu kufanele kwenziwe kuphela esimweni esibhedlela, lapho yonke imithetho inzalo uyalandelwa.
Ukukhala dermatitis umuthi esilaphekayo kanye zendabuko. bona kuphela kumele kuhlanganiswe nemithi kanye imvume kudokotela ekwelapheni.
Baby, kuphela ukusetshenziswa umhluzi ngokulandelana uvunyelwe kusukela kule eziyinkimbinkimbi. The guys kusukela ngonyaka Kunconywa oyisithobo amazambane yashizi. Kuphela slurry kufanele kuqala zihambisana gauze ahlanzekile.
Ngemva kweminyaka engu-5, ungasebenzisa lotions kusukela umhluzi chamomile noma celandine.
A nomphumela omuhle iyanikezwa futhi Physiotherapy. Lezi zihlanganisa:
Laser kanye therapy ngodaka.
Ukusetshenziswa kulezi zindlela uyombhubhisa sifo ngesikhathi esifushane futhi ngaphandle nemiphumela.
Izinyathelo zokuvimbela ukuba ukukhala dermatitis ezinganeni okuhloswe ngaso egcwalisa imidanti:
inhlonipho inhlanzeko wengane siqu nsukuzonke;
isilawuli Amandla omama nezingane, uma ayengazange webele ezikhuluphalisiweyo;
ukuzihlanganisa nge ecasulayo at komzimba ekhona;
ukwelapha izifo zesisu, pancreas;
ukufinyelela esifike udokotela.
Ukwenza lezi zincomo elula kuzosiza ukuvimbela izingane nabazali bazo ezinjalo izifo ezingemnandi ezifana ukukhala dermatitis. Ngisho noma lesi sifo isakhasa, kumelwe sizame ukuba afeze izinyathelo zokuvimbela. Lokhu kuzogwema yezinkinga kanti ingane uhlushwa Ukulunywa ingasaphathwa.
"Vamelan": yokusetshenziswa, izinkomba kanye nokubuyekeza